မြင့်မားသော Precision BT40-TER20 တင်းကျပ်တယ်လီစကုပ်နှိပ် Shanks China Manufacturer
Home > ထုတ်ကုန်များ > Collets System ကိုနှိပ် > Collets Shanks နှိပ် > မြင့်မားသော Precision BT40-TER20 တင်းကျပ်တယ်လီစကုပ်နှိပ် Shanks
မြင့်မားသော Precision BT40-TER20 တင်းကျပ်တယ်လီစကုပ်နှိပ် Shanks, ဒေါင်လိုက် disc ကိုရှုး, ကြိတ်ရှုး၏အမျိုးအစားစုံ, မကျြနှာကိုကြိတ်ရှုး, ရှုး milling, သုံးမျက်နှာကြိတ်ရှုး .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ tools များနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြတ်တောက်: အ axial သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကြိတ်ရှုး၏ radial drive ကို groove ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်သင့်လျော်သော။ ရှေးခယျြသည်မြင့်မားသော Precision BT Shanks Tool ကို Holder, မျှမျှတတ G6.3 သို့မဟုတ် G2.5 ။
1. Size: BT30, BT40, BT50
သင့်လိုအပ်ချက်အဖြစ် 2. Morse က type.Full အရွယ်အစား။
3. နျ Standard: စရဖ 403
ငါတို့သည်ကိုယ်စက်ရုံရှိစဉ်ကတည်းကအချိန်အတွက် 5. Delivery အာမခံနိုင်ပါတယ်
မြင့်မားသော Precision တင်းကျပ်တယ်လီစကုပ်နှိပ် Shanks
BT40 တင်းကျပ်တယ်လီစကုပ်နှိပ် Shanks
BT40-TER20 တင်းကျပ်တယ်လီစကုပ်နှိပ် Shanks
မြင့်မားသော Precision စင်တာများသတ်မှတ်ပေးသည်
မြင့်မားသော Precision Z-ဝင်ရိုးတန်းစကေး
မြင့်မားသော Precision တိုက်ရိုက်စင်တာများ CNC
မြင့်မားသော Precision မျက်နှာစက် Arbore
မြင့်မားသော Precision သံမဏိလေ့ကျင့်ခန်း Chuck